Iva Hunhu manejimendi system - SiChuan XiangYue Power Line Zvikamu Co., Ltd.
XY Tower yakavimbiswa kuendesa basa rehunyanzvi kune vatengi vedu.Hunhu manejimendi system ndeimwe yemisimboti marongero eXY Tower.Kuti ushande Hunhu hwekutarisira system, XY Tower inova nechokwadi chekuti zvese zvinodiwa uye kudzidziswa zvinopihwa uye vashandi vese vanotora basa rinoshanda mukuita iyo Quality Management System.
YeXY Tower, mhando rwendo uye kwete kwekuenda.Naizvozvo, chinangwa chedu ndechekuchengetedza vatengi vedu nekugadzira zvemhando yepamusoro zvevhu, shongwe dzekutapurirana, telecom shongwe, substation zvimiro uye masimbi emidziyo pamitengo yemakwikwi uye nekuona kuburitswa nenguva.
Kuve chikamu chakakosha chekugadzira maitiro, mhando inovimbiswa maererano neiyo ISO zviyero.Iyo XY Tower Quality Management System inosimbiswa kune ISO 9001:2015, ISO14001, ISO451001, ISO1461.
Iwo manejimendi eXY Tower akazvipira kushanda ese maficha ebhizinesi kune iwo zviyero zvinopa yakanakisa sevhisi kune vese vatengi.Izvi zvinotsigirwa neanofambira mberi manejimendi maitiro anokurudzira emhando tsika mukambani yese.
Iwo manejimendi akazvipira kuenderera mberi nekuvandudzwa kweQuality Management.Izvi ndezvekuona kuti kambani inoshanda nemazvo uye nemazvo uye inosangana nezvinodiwa nevatengi vedu.
Iyo QA/QC inotungamirwa nevanoongorora vakanyatsodzidziswa vanoshandisa michina yemazuva ano yekuyedza kuve nechokwadi chemhando yepamusoro uye kupera kwakanaka.Dhipatimendi iri rinotungamirwa neMukuru wedu mukuru zvakananga.
Basa reQA/QC rinovimbisa kuti zvese zvekushandisa zvinotevedza zviyero zveISO kana zvinodiwa zvakajairwa nevatengi.Zviitwa zvekutonga kwemhando yepamusoro zvinotanga kubva kune yakabikwa kuburikidza nekugadzira uye galvanizing kusvika pakupedzisira kutumira.Uye zvese zviitwa zvekuongorora zvichanyorwa zvakanaka muFabrication Checklist.
QA/QC ingori nzira yekuchengetedza mhando.Kugadzira tsika yemhando mukambani yese inonyanya kukosha.Iwo manejimendi anotenda kuti kunaka kwechigadzirwa hakuenderane neQA/QC dhipatimendi, inotemerwa nevashandi vese.Nokudaro, vashandi vose vakaitwa kuti vazive nezvekuzvipira kwehutungamiri kune iyi purogiramu kunyanya uye hutano huripo uye vanokurudzirwa kuratidza kutsigira kwavo kune hurongwa nekuramba vachitora chikamu.
Tower tension bvunzo inzira yekuchengetedza mhando, chinangwa chekuyedza kumisa iyo tension test maitiro kuve nechokwadi chekuchengetedzwa kwemhando yechigadzirwa nekukakavadzana kunotambura panguva yekushandiswa kwakajairwa kana kushandiswa kwakakodzera kunotarisirwa, kukuvara uye kushungurudzwa kwechigadzirwa.
Iko kuongororwa kwekuchengetedza kwesimbi shongwe ndeye yakazara ongororo yekuchengetedzwa kwesimbi shongwe kuburikidza nekuferefeta, kuona, kuyedza, kuverenga uye kuongorora zvinoenderana neazvino dhizaini dhizaini.Kuburikidza nekuongorora, isu tinogona kuona iyo isina kusimba zvinongedzo uye kuratidza iyo yakavanzika njodzi, kuitira kuti titore anoenderana matanho ekuona kushandiswa kwekuchengetedza shongwe.